Agaasimaha SONNA oo Bulgaria uga qeybgalay shirka Wakaaladaha wararka Adduunka+sawirro | Farfiiq
Agaasimaha SONNA oo Bulgaria uga qeybgalay shirka Wakaaladaha wararka Adduunka+sawirro
Muqdisho(SONNA) Madaxweynaha Dalka Bulgaria Rumen Radev ayaa maanta si rasmi ah u furay shir caalami oo ay isugu yimaadeen madax ka socota Wakaaladaha Wararka Adduunka oo Soomaaliya ay kujirto,kaasi oo looga hadlayo arrimo dhowr ah oo la xiriira howlaha warbaahineed ee dunida.
Maxim Minchev, agaasimaha guud ee Wakaalada Wararka Dalka Bulgaria ayaa soo dhaweeyey ka qeybgalayaasha,isagoo uga mahadceliyay sida ay waqtigooda u soo hureen in ay ka qeyb galaan shirkaasi muhiimka ah.
Waxaa iska kaashaday qaban qaabada shirkan caalamiga ah, Wakaaladda Wararaka dalka Bulgaria iyo golaha Wakaaladaha Adduunka,waana shirkii lixaad oo la qabto,kaasi oo socon doona mudo u dhexeysa June 13-15, 2019 kana socda magaalada Sofia ee Caasimadda Dalka Bulgaria.
Madaxweynaha Dalka Bulgaria Rumen Radev oo ka hadlayay furitaanka shirkan ayaa bogaadiyay in diiradda la saaro fursadaha iyo dhibaatooyinka ku hor-gudboon Wakaaladaha Wararaka Aduunka,isagoo intaasi ku daray in hab-tabineedka wareed ee warbaahinta ay tahay mid saldhig u ah mustaqbalka nolosha aadanaha.
Soomaaliya waxaa uga qeybgalaya agaasimaha Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee (SONNA) Mudane Cabdullaahi Sheekh C/raxmaan Heybe,oo siweyn loogu soo dhaweeyey caasimadda dalkaasi Bulgaria oo uu shirku ka socdo.
Inta uu socdo shirkani waxaa diiradda lagu saari doonaa caqabadaha ku hor-gudbada howlaha warbaahineed iyo hiigsigooda,arrimaha laxiriira baraha bulshada iyo dhaqanka ee qarnigan 21-aad ee ay dunidu joogto haatana,sidoo kale waxaa diiradda lagu saari doonaan wararka been abuurka ah,milkiyadda wakaaladaha cusub ee soo kordhaya,xogaha warbaahineed iyo sida loo helo,waxaana goob joog ka ah oo aragtiyadooda isweydaarsanaya ilaa 200 wafuud ah oo ka kala socota 100 Dal oo kamid ah wadamada Caalamka.
Waxaa goobta shirka ku sugan khubaro caalami oo ku xeel dheer arrimaha warbaahinta, madaxd ka socota Wakaaladaha Wararka ee Dunida,waana fursad ay ku kala war-qaataan,iyadoo la wadaagayo aragtiyo horumarineed ee wax dhisaysa,si loo wajoho howlaha horyaala ee qarnigan iyo sidii la iskula jaanqaadi lahaa.
Agaasimaha Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee (SONNA) Cabdullaahi Sheekh C/raxmaan Heybe ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Bulgaria waxaa uu kulamo kala duwan uu la yeelan doonaa madaxda warbaahinada kale ee dunida oo shirkaasi ka qeyb galaysa,si uu ugala hadlo arrimo la xiriira isdhaafsiga fursadaha wada shaqeeneed ee Wakaaladaha kale ee Adduunka iyo Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee (SONNA).